Xildhibaan ka badbaaday weerarkii Kismaayo oo sir culus Qarxiyay & cida ka dambeyso. – Xeernews24
Xildhibaan ka badbaaday weerarkii Kismaayo oo sir culus Qarxiyay & cida ka dambeyso.
Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caana-nuug) ayaa sheegay inuu jiro tuhun ku saabsan qaraxii iyo weerarkii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Kismaayo aysan Shabaab kaliya ku lug laheyn.
Xildhibaanka ayaa wareysi uu siiyay Idaacada Kulmiye ayaa sheegay in weerarkii ka dhacay Jimcihii uu yahay mid ku cusub maamulka Jubbaland oo aheyd meel nabdoon oo xasillooni ka jirtay, balse qaraxaas iyo weerarkaas lagu soo aadiyay xilli xasaasi ah oo doorasho ku soo fool leh dahay maamulkan Jubbaland.
“Laamaha ambiga ayaa howsha gacanta ku haya, hotelka la weeraray wuxuu ahaa Hotel cusub oo dadka ay xiiseynayeen, wixii baadhitaan iyo xog Hey’addaha Amniga ayaa og, laakiin Shabaab kaliya howl ku eg ma aheyn, howl dad badan ka soo shaqeeyeen oo juhdi iyo waqti la geliyay buu ahaa, mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ayaa gacanta lagu hayaa”ayuu yidhi Xildhibaan Caana-Nuug.
Xildhibaanka ayaa sheegay inuu isaga ka mid ahaa dadkii ku jiray Hotelka, xilliga la weerarayay, isla markaana labo saac habeenimo laga soo badbaadiyay oo Ciidamada Ammaanka u soo gurmadeen sida uu yidhi.
Waxaa uu sheegay in dowladda Federaalka ay muddo ku heysay Jubbaland dagaal curyaamin ah, isla markaana doorashada ku soo fool leh Jubbaland iyo weerarka dhacay ay wax badan iska kaashan karaan.
“Gacmo waa weyn oo wajiyo badan leh ayaa meesha ku jira oo howsha fududeysay, qarax si weyn loo soo agaasimay buu ahaa, doorashada Jubbaland ku soo fool leh, dagaalka dowladda Federaalka kula jirto iyo wax badan baa iskaashanaya tuhun badan ayaa nagu jira”ayuu yidhi Xildhibaan Caana-Nuug.
Weerarkii jimcihii la soo dhaafay ka dhaca Kismaayo ayaa waxaa mas’uuliyadiisa sheegatay Al-Shabaab, waxaana weerarkaas lagu dilay illaa 26 ruux, halka 50 kalena ku dhaawacmeen, waxaa uu ahaa weerarkii u horeeyay noociisa oo Al-Shabaab ka fuliso magaalada Kismaayo.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/07/kismaayo.png 167 302 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-07-15 10:09:442019-07-15 10:09:44Xildhibaan ka badbaaday weerarkii Kismaayo oo sir culus Qarxiyay & cida ka dambeyso.
DAAWO: Wasaarada Caafimaadka Soomaaliya Oo War Ka Soo Saartay Markabkii Xoolaha... TRUMP oo wali ku dhagan weerarna xuna ku qaaday Soomaaliya iyo Ilhan Cumar.